Manchester United ayaa talaabo weyn u qaaday u soo bixitaankeeda wareega 16ka Champions League ka dib markii ay ka aargoosatay kooxda Turkiga ee Istanbil Basaksehir oo ay 4-1 ku xaaqeen iyagoo marti ku ahaa garoonka Old Trafford.
United ayaa waxaa dhagahooda ka sii guuxayay guuldaradii ceebta aheyd ee ka soo gaartay kooxdaan yar kulankii ay booqdeen Turkiga ka hor kulamadii heerka caalami.
Ciyaar rasmi ah oo dhexmartay Rayo Vallecano vs.
Tababare Solskjaer ayaa isbedel weyn ku sameeyay shaxdiisa isagoo ku soo bilaabay saxiixyadii xagaaga ee Alex Telles, Van de Beek iyo Edinson Cavani.
Laakiin xiddiga garoonka waxaa noqday hogaamiyahooda cusub Bruno Fernandes kaasoo labo gool dhaliyay qeybtii hore ee ciyaarta, iyadoo goolka koowaad uu yimid daqiiqadii 7aad markii karoos uu soo qaaday Alex Telles oo madax lagu sii taabtay uu helay Bruno Fernandes oo kubad gantaal ah shabaqa dhex dhigay aadna u qurux badan.
Man United ayaa daqiiqadii 12aad shabaqa ku soo taabatay kubad ay si wadajir ah uga soo shaqeeyeen Van de Beek, Bruno Fernandes, Cavani iyo Rashford laakiin waxaa loo diiday inay offside aheyd.
Bruno Fernandes ayaana hogaanka u sii dheereeyay Man United daqiiqadii 19aad markii karoos uu soo qaaday Telles uu taabtay goolhaye Mert Gunok laakiin waxaa kubada helay oo shabaqa ku taabtay Fernandes.
Waa goolashiisii 21aad ee 35 kulan uu u saftay Manchester United tartamada oo dhan
Man United ayaa rigoore loo dhigay daqiiqadii 33aad markii uu Boli Bolingoli qalad kula galay xerada ganaaxa Marcus Rashford, weeraryahanka Ingariiska ayaana u soo istaagay rigoorada isagoo gool u sarifay daqiiqadii 35aad.
Kooxda Turkiga ayaa gool soo ceshatay daqiiqadii 75aad markii laad xor ah uu soo tuuray Turuc uu soo bixiyay goolhaye De Gea xilli ay kubada dhaaftay xariiqda goosha. Garsooraha ayaan tilmaamay inay gool tahay madaama uu De Gea kubada ka soo bixiyay goolka dhexdiisa.
Kooxda Turkiga ayaa carcar muujisay qeybtii labaad iyagoo birta u garaacay Man United daqiiqadii 80aad.
Laakiin Man United ayaa qosolka ku danbeysay iyadoo goolka afaraad uu u saxiixay waqtigii dhimashada ciyaarta Daniel James, waxayna ciyaarta ku soo dhamaatay 4-1 oo ay United kaga aargudatay kooxda reer Turki.
Dhanka kale kooxda Paris Saint-Germain ayaa sii adkeysay tartanka Group H ka dib markii ay 1-0 ku dubteen kooxda Jarmalka ee RB Leipzig oo marti ku aheyd garoonka Parc de Princes.
PSG ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta qeybteedii hore markii rigoore loo dhigay iyadoo rigoorada uu u saxiixay laacibka reer Brazil Neymar, waxaana qeybtii hore lagu kala maray 1-0 oo ay PSG hogaanka ku heysay.
Afar kulan oo la ciyaaray Group H waxaa 9 dhibcood ku hogaamineysay Man United halka PSG ay lix dhibcood kaalinta labaad ugu jirto, waxaa iyadana lix dhibcood leh kooxda kaalinta 3aad ee RB Leipzig iyadoo kooxda Turkiga ee Istanbul Basaksehir ay leeyihiin 3 dhibcood.